छोरा नजन्मेपछि महिलाद्वारा आत्माहत्या ! सु-साइड नोटमा श्रीमानलाई अर्को बिहे गर्न आग्रह...पुरा हेर्नुहोस - Taja Report
Homeसमाचारछोरा नजन्मेपछि महिलाद्वारा आत्माहत्या ! सु-साइड नोटमा श्रीमानलाई अर्को बिहे गर्न आग्रह…पुरा हेर्नुहोस
छोरा नजन्मेपछि महिलाद्वारा आत्माहत्या ! सु-साइड नोटमा श्रीमानलाई अर्को बिहे गर्न आग्रह…पुरा हेर्नुहोस
July 9, 2018 समाचार Comments Off on छोरा नजन्मेपछि महिलाद्वारा आत्माहत्या ! सु-साइड नोटमा श्रीमानलाई अर्को बिहे गर्न आग्रह…पुरा हेर्नुहोस
प्रेम सुनार, बुटवल । श्रीमानले अर्को विवाह गरेपछि कतिपय श्रीमतिहरु सम्बन्ध विच्छेद माग्ने, वहुविवाहको मुद्धा दिने र कतिपयले हेलत्व सहन नसेकर आत्मा हत्या समेत गरेका घटना बाहिर आई रहेका बेला छोरा जन्माउनका लागि पटक पटक श्रीमानलाई अर्को विवाह गराउन दबाब दिई रहेकी बाग्लुङ्गकी एक महिलाले भने श्रीमानले उक्त विवाह गर्न नमानेपछि आत्मा हत्या गरेकी छन् ।
यसरी हुन्छ सार्वजनिक यातायातमा यौन दुर्व्यवहार (भिडियो रिपोर्ट)
नेपाल को इतीहास मै पहिलो घटना घट्यो , यसरी चालियो कदम हेर्नुस भिडियो